CEPSA ichaenda kuruzhinji | Ehupfumi Zvemari
CEPSA ichaenda kuruzhinji
Imwe yenyaya dzemusika wekutengesa kuti zhizha rino richaunzira kwatiri kupinda kwekambani yemafuta CEPSA mumisika yemunyika. Ichi chiitiko chakange chakatomirira chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati vane tarisiro dzakakosha muukoshi hutsva uhu huchave hwakanyorwa pamusika wemasheya. Mushure mekuve nemakore mazhinji uye mazhinji kunze kwenzvimbo dzekutengesa. Iye zvino isu tinongofanirwa kumirira yavo kondirakiti mamiriro ekuratidza kana zvichizobatsira kupinda munzvimbo dzavo.
Chero zvazvingaitika, zvakatangira CEPSA hazvisi kuvimbisa zvakanyanya zvichibva pamakambani akaita chirongwa ichi chebhizinesi mumakore mana apfuura. Iko, hazvigone kukanganwika kuti makambani ekukosha kwe Metrovacesa, Parques Reunidos uye Telepizza vakadzoka vasina chavakawana. Mune vamwe vacho vane hurema hwakakura muzvinzvimbo zvavanoratidza panguva ino. Kunyangwe, hongu, ivo vasiri ivo vakasarudzwa kuita mari yekudyara kubva zvino zvichienda mberi, mumaonero evamwe vaongorori vanokosha mumisika yemari.
Makuhwa anoti boka remafuta emunyika rine huwandu hwe kusvika pamamiriyoni gumi nemashanu emamiriyoni, izvo zvirokwazvo zvinosanganisira chikwereti chako. Zvinoenderana nezvido zvevashambadzi vadiki nepakati, zvavanofarira pakutenga hazvina kukwira sezvakatarisirwa. Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti fungidziro dzakaitwa nemisika dzinoratidza kuti vagovani veCepsa vachazowana gohwo remugovano yepedyo kusvika 6%. Izvi zvinoreva kuti chichava chimwe chevanopa zvakanyanya pamusika weSpanish wemusika.
1 CEPSA: ine yakawanda chikwereti
2 Mutengo wekupinda mune kukosha
3 Chikamu cheOiri mumisika
4 Kuvhura kumisika mitsva
5 Maonero e2019
6 Kukoshesa kwezvikamu zvako
CEPSA: ine yakawanda chikwereti
Tsamba yekuvhara yekambani nyowani inozove yakanyorwa mumavhiki anotevera inopa marudzi ese emanzwiro mumisika uye pakati pevatengesi pachavo. Nekuti fungidziro yevakuru inoratidza kuti ichaenda pamusika wemari pamwe nekukosheswa kuri pakati pe7.000 uye 8.000 mamirioni euros. Ruzivo rwekutanga rweaya data rebhizinesi rinowirirana chaizvo nezvakanaka kupfuura izvo zvakatanga kuratidzwa nekambani. Kune rimwe divi, ine chikwereti zvishoma kupfuura mamirioni mazana matatu nemazana maviri uye kuti chero zvodii zvaizotungamira kuchinzvimbo chayo mumisika yezvemari iri kukosheswa panosvika mamirioni e11.000 euros.
Zvisinei, mubvunzo mukuru pakati pevashambadzi vadiki nepakati ndewekuti vaifanira kuenda kuIPO here kana kuti kwete. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti a kuruzhinji kupihwa kwekutengesa (IPO) mashandiro anoitwa kuburikidza nemusika wemasheya, kuburikidza newanopa bhidha mari yekutengesa pfuma yemari yekambani kana yenzanga. Inogona zvakare kunzi kuenda kuruzhinji, IPO, kana kuenda kuruzhinji mumisika yemari. Nemafungiro emarudzi ese kubva kune vakasiyana vanoongorora zvemari.
Mutengo wekupinda mune kukosha
Chikamu chakanaka chesavers chiri kushamisika kana uri mutengo wakanaka iyo yakaiswa kuzviito zvayo yekubatanidzwazve kweECPSA nemisika yemari. Pamusoro pechinhu ichi hapana pfungwa yakatsanangurwa pachikamu chevaongorori vezvemari, kunyangwe paine chinhu chimwe icho anenge munhu wese anobvumirana nazvo uye icho chiri chekuti mutengo wacho hausi kuzove chipo kune vagovana vatsva. Mune mamwe mazwi, hapazove nesarudzo kunze kwekuongorora kuti ndeapi mamiriro ezvinhu echipo chitsva ichi cheveruzhinji chiri kutengeswa pamusika weSpanish wemusika. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Kunyangwe pane zvinopesana, imwe yesimba rayo ndiko kukwira kwemutengo we petroleum uye kuti mazuva ano kwave kuenda kuyedza mazinga akakosha seayo akagadzwa mu $ 80 dhiramu. Kubva pane ino maonero pamitengo yayo, inogona kunge iri sarudzo inonakidza kwazvo kuita kuti kuchengetedza kunobatsira kubva ikozvino. Uye zvakare, iyi mari yemari inogona kukoshesa zvakanyanya mumavhiki anotevera nekuda kwemutemo wekupa uye kudiwa izvo zviri kukanganisa mutengo weichi chakakosha mbishi pasi.
Chikamu cheOiri mumisika
Hapana mubvunzo kuti zvaunotarisira kukoshesa zvikamu zvako zvinoenderana nekushanduka kwegoridhe dema. Ikozvino misika yavo iri pachena kusimudzira, kunyangwe chero panguva ipi iyo iyo tsika inogona kuchinja kunyangwe nehumwe huturu. Hatigone kukanganwa kuti mutengo wemafuta pamisika yezvemari wakagara wakachinja zvakanyanya. Zvipikiri pamusoro kukwirira kwakanyanya mune imwechete yekutengesa chikamu. Ndiyo njodzi huru yekuvhura nzvimbo munzvimbo ino yekuchengetedza inozonyorwa zvakare muSpanish equities. Kunyanya zvigadzirwa zvemutengo zvekuisa munzvimbo dzako pazuva remusangano wako mutsva nemusika wemasheya.
Kune rimwe divi, kupinda kwekambani yemafuta yeECPSA mumisika yemari inodudzirwa nevanoongorora zvemari zvine njodzi huru nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Imwe yeanonyanya kukosha anogara mukuti iwo akasarudzwa seyakakosha uye anogona kuve anodikanwa kwazvo. Kusvika padanho rekuti vazhinji havatomboenda kune iyi yeruzhinji kupihwa kwekutengesa uko gore idzva remusika wemasheya riri kuzovhara. Munharaunda yakajairika iyo isinganyatso kuvimbisa sezvo kudonha mumasheya nema indices emasheya kuri kuwanda mumisika yese yemari.
Kuvhura kumisika mitsva
Chimwe chiitiko chekutarisa maererano nezveECPSA kukosheswa ndechechokwadi, kuwedzera kwemabhizinesi ayo kutenderera pasirese. Chimwe chinonyanya kushamisa ndicho chauri kuva nacho munyika isinganzwisisike sezvazviri Tailandia, kuSoutheast Asia. Iko kwave kuve imwe yemakambani ari kuvhura minda mitsva mukutsvaga kwemafuta asina kuchena, kunyange zvisati zvaita kuti iwane purofiti mumaakaundi ayo ebhizinesi. Nekudaro, zano rebhizinesi iri rakanangana nepakati nepakati uye rinogona kuve rinonakidza kune vanoponesa vanosarudza idzi nguva refu dzekugara kune yavo mari mumusika wemasheya.
Kune rimwe divi, munguva pfupi iri nemutengo wazvino wedhiramu risina kuchena mariri, iro rinogona kuramba richikwira mumisika yemari kutenderera pasirese. Asi hazvizivikanwe kuti kusvika kupi iyo kutanga kuramba. Imwe poindi mukufarira kwayo ndeyekuti mukati memakambani emunyika makwikwi anenge asiri nil. Iyo chete bhenji rekuyera mafuta repsol inosanganisirwa muinchmarkmark index yeSpanish stock market, iyo Ibex 35.
Naizvozvo, hakuzovi nesarudzo asi kuenda kunze kwenyika kunotora zvinzvimbo mune mamwe makambani ehunhu uhwu. Kunyanya pamisika yemasheya eGreat Britain uye kunyanya United States. Kunyangwe pamutengo wekufungidzira makomisheni mune manejimendi ari kunyanya kuda, zvakapetwa kaviri kupfuura mumusika wemasheya wenyika.
Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti makambani ari muchikamu chemafuta anozokwanisa kupemberera kubuda kwegore rino vaine tarisiro nekuda kwe rebound mumutengo wemafuta. Asi pane zvimwe zvakakomba zvisingazivikanwe nezve zvinogona kuitika gore rinouya uye zvakawanda zvichitaura nezvemafuta asina kuchena. Iko kushanduka kwemaitiro kunogara kuripo uye kusvika padanho rekutsausa chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Iyi ndiyo njodzi inofanirwa kutariswa kana uri mumwe wevanhu vane chinangwa chekuvhura nzvimbo muECPSA kana mune imwe kambani ine zvakafanana maitiro.
Ehezve, chimwe chekukurudzira chichava chidimbu icho chaichabhadhara gore rega kune avo vagovana navo uye izvo zvinokubatsira iwe kugadzira yakatarwa mari yekudyara mukati memusiyano. Chero chii chinoitika nemitengo yezvikamu zvako mumisika yemasheya uye iri zano rinobatsira kwazvo rekukudziridza mune yepakati nepakati, kwete munguva pfupi. Kune rimwe divi, pane mamiriro matsva mumisika yepasi rose yemashamba iyo inofungidzirwa kuti ndeyemhando yepamusoro. Uye ichi chinhu chinogona kukanganisa zvakanyanya CEPSA's IPO. Icho chinhu icho pasina kupokana iwe unofanirwa kufunga nezvacho kana iwe usiri kuda kutora kumwe kushamisika kwakashata kubva panguva ino.
Kukoshesa kwezvikamu zvako
Chimwe chinhu chaunofanirwa kuongorora mukambani ino chakanangana nemafuta ndechekuti icho kuratidzwa kwekunze yakanyanya kuderedzwa pane vamwe vari muchikamu. Chokwadi ichi chinogona kuyera kukosha kwayo, kunyangwe kubva padyo neIPO. Zvakare nemakwikwi akasimba ane mhando dzekambani idzi, kunyanya nemakambani anoshanda mune dzimwe nzvimbo dzenzvimbo nekushandisa kukuru.
Chero zvazvingaitika, hapana mufaro wakawandisa pakati pevashambadziri nezve kubudirira kweichi chiitiko uye neimwe nzira zvese zvinoenderana nemutengo wekutanga wekubuda kwavo. Ichave iyo inosarudza kana iko kuvhiya kuri kubatsira chaizvo kana kwete. Chimwe chinhu icho chiri kumusoro mumhepo uye chinozivikanwa nevanoongorora zvemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » CEPSA ichaenda kuruzhinji
Ini ndinokurudzira iwe kuti uedze kumahombekombe masevhisi kubva kukambani Sin Impuesto. Chokwadi ndechekuti zvave zvakanaka kwandiri uye zvinounza mabhenefiti akasiyana siyana. Ivo vanotibatsira kuchengetedza zviwanikwa zvedu, kuita mari, kusimudzira bhizinesi repasirese, uye zvimwe zvakawanda mabhenefiti
Pindura kuna Alice
6 makiyi ayo musika wekutengesa unozotsamira pakupera kwegore
Ndezvipi zvigadzirwa zvinobvumidza kusiyanisa mari?